အသွေးအပြစ်ရှိခြင်း – ဒေါသအမျက်၏ ဒုတိယ နှင့် ၃ ပုလင်း – ယေရှုခရစ်၏ ဗျာဒိတ်တော်
သွေးအပြစ်ရှိခြင်း – ဒေါသအမျက်၏ ဒုတိယ နှင့် ၃ ပုလင်း
ေမ ၂၀၊​ ၂၀၂၂ ဧပြီလ 22 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည် သူ၏ဖန်ပုလင်းကို ပင်လယ်ပေါ်သို့ သွန်းလောင်း၍၊ သေသောသူ၏အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏။ အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ရှိသမျှတို့သည် ပင်လယ်၌သေကြ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၃
သင်သည် အပြစ်ရှိမှန်း သိသောအခါ၊ သင့်ဝိညာဉ်သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားကြောင်းကိုလည်း သိထားသင့်သည်။ အဲဒါက ဘုရားသခင်ရဲ့ အမျက်တော် ပုလင်းတွေကို သွန်းလောင်းခြင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ- မင်းရဲ့ ဝိညာဉ်ရေး အခြေအနေ ဝေဒနာကို ခံစားခြင်းအားဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပြုမိစေဖို့၊ ဒါကြောင့် မင်း နောင်တရပြီး ဘုရားသခင်နဲ့ မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံနိုင်မှာပါ။
ယခင်ပို့စ်တစ်ခုမှ ပြန်လည်သတိရမိပါလိမ့်မည်။ ပင်လယ်သည် နိုင်ငံများစွာ၏ လူများစွာကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ ကြောင်သူတော်၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားသော နိုင်ငံများစွာကို ကိုယ်စားပြုသည်။. အထူးသဖြင့် ယေရှုအပေါ် သစ္စာမရှိတော့တဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သူတို့ ရောက်သွားတဲ့အခါ။
“သူကလည်း၊ ရေတွေ ပြည်တန်ဆာထိုင်ရာ၊ လူမျိုး၊ များပြားသော လူမျိုး၊” ~ ဗျာဒိတ် ၁၇:၁၅
ဗျာဒိတ် ၁၇ ပါ ပြည့်တန်ဆာသည် ခရစ်ယာန်ဟု ဆိုထားသည့် အရေခြုံမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခရစ်တော်၏မယားဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသော အသင်းတော်များသည် ယေရှုနှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံရန် ဝိညာဉ်ရေးအရ သစ္စာမဲ့ကြသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို နှိမ့်ချပြီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွင် အပြစ်ရှိလာကြသည်။
ထို့ကြောင့် ရေနှင့်အသွေးကို စီရင်ခြင်းသည် လူများစွာကို အမှန်တကယ် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထင်ရှားလာသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ပြည်တန်ဆာသည် လူတို့ကို ထိုင်၍ ချုပ်ကိုင်သောကြောင့်၊
အစောပိုင်းက၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ (သမိုင်း၌) လူတိုင်းသည် ဤလျှို့ဝှက်မှု၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် သေဆုံးကြသည်မဟုတ်။ အချို့က အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သေးသည်။ ယင်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၈ နှင့် အခန်းငယ် ၈ တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။တတိယနှင့် စတုတ္ထရာစုများတွင် ချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ဝိညာဉ်ရေးထက် နိုင်ငံရေးစိတ်ထား ပိုရှိလာကြောင်း ပြသနေသည်။ သူတို့သည် လောကီအကျိုးနှင့် တန်ခိုးအတွက် ဧဝံဂေလိတရားကို အပေးအယူလုပ်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
“ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည် မှုတ်သောအခါ၊ မီးတောက်နေသောတောင်ကြီးသည် ပင်လယ်ထဲသို့ ချပစ်လိုက်သည်နှင့်၊ ပင်လယ်သုံးစုသည် သွေးဖြစ်လေ၏။; သမုဒ္ဒရာ၌ရှိသော သတ္တဝါသုံးစုတစုသည် အသေခံ၍၊ သင်္ဘောသုံးပုံတပုံ ပျက်သွားတယ်။” ~ ဗျာဒိတ် ၈:၈-၉
မီးလောင်နေတဲ့ တောင်ကြီး (ဘုရားကျောင်းလို့ ယူဆရတဲ့) လူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးပင်လယ်ထဲမှာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီး တစ်ချိန်က ဝိညာဉ်ရေးသမားတွေလည်း အပြစ်က ပြန်ဝင်လာပြီး သူတို့အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်လူလတ်ပိုင်းအရွယ်အခြေအနေသည် ၎င်းသည် လုံးလုံးလျားလျား ယိုယွင်းနေသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ကြီးပြင်းလာသည်အထိ ဆက်လက် “ဆာလောင်” လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်း၏အပိုင်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အစောပိုင်းက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Pergamos ဘုရားကျောင်းခေတ်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် အရေခြုံအာဏာစက်ကို စာတန်က အပြည့်အ၀သတ်မှတ်ပေးသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ပင်လယ်၏သုံးစုတစုသည်လည်း အပြစ်ရှိ၏၊ အကြောင်းမူကား၊ တစ်ချိန်က သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သော ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် ယခုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဟု ဆိုကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အပြစ်များဆီသို့ ပြန်သွားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်ထဲကလူတိုင်းဟာ ဧဝံဂေလိတရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနာဖို့ အခွင့်အရေးမရရှိခဲ့တဲ့အတွက် လူတိုင်းက သွေးနဲ့အပြစ်မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ပင်လယ်တစ်ပြင်လုံးသည် သွေးအဖြစ်သို့မပြောင်းလဲဘဲ၊ လူတိုင်းက ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောလူများကို ညှဉ်းဆဲခြင်းတွင် အပြစ်မရှိကြသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဗျာဒိတ် ၁၆ တွင်၊ ဒုတိယ “ဖန်ပုလင်း” မှ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်– ယခု လူပင်လယ်ရှိလူတိုင်းသည် ဒုက္ခရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ရှိနေသည့် သွေးသားအပြစ်ရှိကြောင်းကို လူတိုင်းသတိပြုမိသောကြောင့် မည်သူမျှ မနှမြောပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ မကယ်လွှတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သွေးသားအပြစ်ရှိသူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဤသွေးဖြင့် အပြစ်ရှိခြင်းသည် ထွက်သွားပြီး ဧဝံဂေလိ သတင်းစကား ပုံစံတစ်မျိုးကို ဖြန့်နေသူများကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိစေကာ ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရသည်။ သူတို့သည် သွေးသားအပြစ်ရှိသူများဖြစ်သောကြောင့်၊ အကြောင်းမှာ ဧဝံဂေလိတရားကို အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုရာတွင်၊ လူများကို အကူအညီတောင်းရန် သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန် ဝိညာဉ်အစာအလုံအလောက်သာပေးစွမ်းရန် ဧဝံဂေလိတရားအလုံအလောက်ပေးရုံသာဖြစ်သည်။ ယင်းက စိတ်ဝိညာဉ်၌ ဝိညာဉ်ရေးအစာခေါင်းပါးမှုကို ဖြစ်စေပြီး လူများစွာသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးကြသည်။ အကျင့်ပျက်သော ဝန်ကြီးဌာန၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့် လူများ ခါးသီးလာသည်။
ဤဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေအား ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အစောပိုင်းက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျဓမ္မက သမ္မာကျမ်းစာကို တရားဟောစင်မှာ သံကြိုးဆွဲချပြီး လူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ထိန်းထားခြင်းအားဖြင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျဓမ္မက တတိယတံဆိပ်ကို ဖွင့်ပေးတယ်။ ထို့ကြောင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ဓမ္မအမှုသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကို ပြန့်နှံ့သွားခြင်းဖြင့် သွေးပြစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍၊ မတူညီသောအသင်းတော်များမှ အခြားဓမ္မဆရာအများအပြားသည် အလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ယခု ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် တတိယပုလင်းတွင်၊ ဤဓမ္မအမှုသည် မြေကြီးပေါ်တွင် သက်ရှိရေများကို ဖြန့်ကျက်ရန် မြစ်တစ်စင်းအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန်ပြုထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဧဝံဂေလိတရားကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လူတွေကို နာကြည်းစေတာကြောင့် သူတို့ကို “သွေးသားအပြစ်ရှိသူ” အဖြစ် အစီရင်ခံပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာပါ နေရာအတော်များများတွင် ခရစ်တော်ကိုရရှိသူများသည် အခြားသူများထံသို့ ခရစ်တော်၏အသက်ရေကို ဖြန့်ဝေပေးသော မြစ်တစ်စင်းနှင့် စမ်းရေကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သွန်သင်ထားပါသည်။ သို့သော် ဗျာဒိတ် ၁၆ တွင် ဤတူညီသောမြစ်များနှင့် စမ်းရေတွင်းများ ပျက်စီးသွားသောအခါ မည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။
“တတိယကောင်းကင်တမန်သည် သူ၏ဖန်ဘူးကို မြစ်နှင့်စမ်းရေတွင်းတို့၌ သွန်းလောင်း၍၊ သွေးတွေဖြစ်လာတယ်။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၄
ပြန်ဝင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၈ တတိယတံပိုးတမန် (ကောင်းကင်တမန်) သည် ကျဆုံးသောဓမ္မအမှုသည် လူတို့ကို နာကြည်းစေနိုင်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူများထံ ပျံ့နှံ့စေသော သတင်းစကားကြောင့် သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌
“တတိယကောင်းကင်တမန်သည် မှုတ်သောအခါ၊ မီးခွက်ကဲ့သို့လောင်သော ကြယ်ကြီးသည် ကောင်းကင်မှကျသဖြင့်၊ မြစ်များ၏ သုံးစုတစု၊; ကြယ်၏အမည်ကို ဒေါနဟုခေါ်၏။ လူအများတို့သည် ခါးသောကြောင့် ရေကြောင့်သေကြ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၈:၁၀-၁၁
တဖန်၊ ဗျာဒိတ် ၈ တွင် ၎င်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် လူများစွာသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားသော်လည်း အားလုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၆ တွင်၊ ဤဖန်ပုလင်းသည် လုံးလုံးလျားလျား ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ သူတို့အားလုံး သွေးပြစ်တွေ ဖြစ်သွားကြပြီ။
သတိရပါ– ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၆ ပါ ဖန်ပုလင်းများထဲမှ သွန်ချခြင်းသည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် အပြစ်အားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း ပြီးဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ပြသနေသည့်အရာမှာ ယနေ့၊ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်၊ သန့်ရှင်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကို သစ္စာရှိပြီး နာခံမည့် အကြွင်းအကျန်များ၏အပြင်တွင် လူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားကြမည်ဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေ အားလုံး သေကုန်ကြပြီ။ မဟုတ်ဘူး ထွက်​လာ​သော​ခေါ်​သံ​ကို​ဖြေ​သည်။ သစ္စာမဲ့ "ခရစ်ယာန်ဘာသာ" နှင့်ဘာသာတရား။
“ထို့နောက် ကောင်းကင်က အခြားသောအသံဟူမူကား၊ ငါ့လူတို့၊ သင်တို့သည် သူ၏အပြစ်များကို မဆက်ဆံကြနှင့်၊ သူ၏ဘေးဒဏ်မှ မခံမယူမည်အကြောင်း၊ သူ၏အထဲက ထွက်သွားလော့ဟု ငါကြား၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၈:၄
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၈ တွင်၊ သတိပေးချက်မရှိဘဲ ဘဝတွင် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ပျက်သောကြောင့် လူတို့အား တံပိုးမှုတ်ကောင်းကင်တမန်များက ဦးစွာသတိပေးခဲ့သည်။ ယခု ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 16 တွင်၊ ဖန်ပုလင်း ကောင်းကင်တမန်များသည် သစ္စာမဲ့သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းအပေါ် ပြီးပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရားစီရင်ချက်များအား အပြီးသတ်စီရင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် သစ္စာမဲ့မှုကို လက်မခံသောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် လူများကို ပိုသိလာသောအခါတွင် သူသည် တာဝန်ခံရန် တာဝန်ရှိသည်။
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုရင် နေ့တိုင်း “ကျွန်မက တခြားသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ သွေးဆောင်မှုကို ပေးခဲ့ပေမယ့် နေ့တိုင်း ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်မှာလား။ ငါမင်းကို တကယ်ချစ်နေသေးလို့ပဲ" လို့ ယုံမှာလား။ မဟုတ်ဘူး! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဆက်လုပ်နေတာ။
ထို့ကြောင့် နေ့တိုင်းလိုလို “ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိသော အရာများတွင် စာတန်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုများ၌ တစ်ဖန် ပေးဆောင်ခဲ့သည် (နေ့တိုင်းလိုလိုပင်) ယေရှုကို ယုံကြည်ရန် အဘယ်ကြောင့် မျှော်လင့်သင့်သနည်း၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို ချစ်ဆဲဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် လူတို့ကို နေ့တိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတင်၍ အသစ်ပြန်စရန် တွန်းအားပေးသူမဟုတ်ပါ။
"အကြောင်းမူကား၊ တစ်ချိန်က ဉာဏ်အလင်းရပြီး၊ ကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးကို မြည်းစမ်းဖူးသူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ခံယူပြီး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကို မြည်းစမ်းပြီး နောင်လာမည့် လောကီတန်ခိုးများကို မြည်းစမ်းဖူးသူတို့အတွက် မဖြစ်နိုင်ပေ။ တဖန်နောင်တတရားနှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ၊ တဖန်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား သည်ကိုမြင်၍ အရှက်ကွဲစေ၏။” ~ ဟေဗြဲ ၆:၄-၆
ရေသည် အသွေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏ခေါ်ဆိုမှုကို တုံ့ပြန်ရန် ငြင်းဆန်သောလူများအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ပုံဆောင်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပင် ယင်းသည် ပုံဆောင်သဘောအရ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ဤအရာ၌ သင်သည်သိရလိမ့်မည်။ မြစ်၌ရှိသောရေကို ငါကိုင်သောလှံတံနှင့် ရိုက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ မြစ်၌ရှိသောငါးတို့သည် သေ၍ မြစ်နံစော်လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မြစ်ရေကို သောက်ရကြလိမ့်မည်။” ~ ထွက်မြောက်ရာ ၇:၁၇-၁၈
ဤတရားစီရင်ခြင်းသတင်းကို သင်သည် အပြစ်ရှာကောင်းတွေ့နိုင်သော်လည်း ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး ၁၆ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါက၊ ယေရှုသည် ဤနည်းဖြင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
“ရေ၏ကောင်းကင်တမန်က၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဤကဲ့သို့ စီရင်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်တော်မူလတံ့၊ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် ပရောဖက်တို့၏အသွေးကို သွန်းလောင်း၍ သောက်စရာအသွေးကို ပေးတော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၅-၆
ခရစ်တော်ကို နာခံရန် သစ္စာမရှိသူများ၊ သစ္စာရှိရန် ရွေးချယ်သောသူများတွင်လည်း အပြစ်တွေ့လိမ့်မည်၊ သစ္စာမရှိသောအဖော်ကဲ့သို့ပင် သစ္စာရှိအဖော်သည် အပြစ်ရှာလိမ့်မည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၊ သစ္စာမရှိသောခရစ်ယာန်ဘာသာသည် သစ္စာရှိခရစ်ယာန်များကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်လေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် အထက်ကျမ်းက ဤသို့ဆိုသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏အသွေးကို သွန်းလောင်းကြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊
ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ သက်သေခံချက်ကို သတ်ခြင်း၌ များစွာသော အပြစ်ရှိသောကြောင့်၊ အတင်းအဖျင်းပြောဆိုခြင်း၊ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း၊
ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား လှည့်ဖြားကာ ဧဝံဂေလိတရား အပြည့်အစုံကို မပေးဘဲ လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် အခြားသော ဝိညာဉ်များစွာ၏ အသွေးအတွက် အပြစ်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဝိညာဏဝံပုလွေဓမ္မဆရာများသည် သူတို့ဟောပြောသော ဝိညာဉ်များအား ဧဝံဂေလိတရား အပြည့်အစုံကို ကြေညာမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်ကို တမန်တော်ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့အား အပြင်းအထန် သတိပေးခဲ့သည်။
“ထို့ကြောင့် ငါသည် စင်စစ်အားဖြင့် သင်တို့ကိုယနေ့မှတ်တမ်းတင်ရန် ငါခေါ်သွား၏။ လူအပေါင်းတို့၏အသွေး. အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်ရှိသမျှတို့ကို သင်တို့အား ငါဟောပြောခြင်းငှါ ငါမရှောင်။ ထိုကြောင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့ကို အုပ်စိုးသောအရာ၌ ခန့်ထားတော်မူသော၊ မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကို ကျွေးမွေးခြင်းငှါ၊ ကိုယ်နှင့် သိုးစုအပေါင်းတို့အား သတိပြုကြလော့။ သိုးစုကိုမနှမြောဘဲ ပြင်းစွာသောဝံပုလွေတို့သည် သင်တို့အထဲသို့ ဝင်ကြလိမ့်မည်ဟု ငါသိ၏။ တပည့်တော်တို့ကို ဆွဲငင်ခြင်းငှာ ကောက်ကျစ်သောစကားကိုပြော၍ လူတို့သည် ထကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ သုံးနှစ်ကြာသောအခါ မျက်ရည်ကျလျက် နေ့စဥ်မပြတ်သတိမပေးဘဲနေ၍၊ ~ တမန်တော် ၂၀:၂၆-၃၁
နောက်တစ်ခု ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၆ တွင် ရေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တရားစီရင်ခြင်းသတင်းသည် ယဇ်ပလ္လင်မှအသံဖြင့် နှစ်ဆတရားမျှတသည်။
“ထို့​နောက် ယဇ်​ပလ္လင်​မှ​အ​ခြား​တစ်​ပါး​က ``အ​ရှင်၊ အနန္တ​တန်​ခိုး​ရှင်​ဘု​ရား​သ​ခင်၊ ဖြောင့်​မတ်​တော်​မူ​သော​အ​မှု​တော်​ရှိ​ပါ​၏'' ဟု​လျှောက်​ထား​၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၇
ဒါဆို ယဇ်ပလ္လင်ထဲက ဒီအသံက ဘယ်သူလဲ။ ယဇ်ပလ္လင်အောက်မှာ ယဇ်ပူဇော်ခံရသူတွေရဲ့ ပြာတွေရှိတယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆဋ္ဌမအခန်းကြီးတွင် ၎င်းတို့သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။.
“ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် အသေခံခြင်း နှင့် သက်သေခံချက်အတွက် ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင် ငါမြင်ခဲ့ရသည်– “အို၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး၊ အို၊ သန့်ရှင်း၍ မှန်သောအရှင်၊ တရားစီရင်တော်မမူပါနှင့် ငါတို့၏အသွေးကို လက်စားချေလော့ မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့အပေါ်၊ ဖြူသော သင်္ကန်းကို အသီးသီး ပေးကြ၏။ သူတို့သည် အချိန်အနည်းငယ်မျှ အနားယူရမည်ဟု သူတို့အား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် အသတ်ခံရသော သူတို့၏ အပေါင်းအသင်းများနှင့် သူတို့၏ ညီအစ်ကိုများ မပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၆:၉-၁၁
ထို့ကြောင့် ယခုတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း အမျက်တော် ဖန်ပုလင်းများထဲမှ သွန်းလောင်းခြင်း၌ ဘုရားသခင်သည် အရေခြုံ ခရစ်ယာန်အတုအယောင်များ၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရဖူးသော သန့်ရှင်းပြီး သစ္စာရှိသူတိုင်း၏ ဆုတောင်းချက်ကို ဖြေကြားနေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ရှိသူတို့အပေါ် “မိမိတို့၏အသွေးကို အပြစ်ပေး” သည်- အကြောင်းမူကား၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် သင်၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအတွက် လက်စားချေမည်မဟုတ်သောကြောင့်၊ သင့်အား တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် မဆင်ခြင်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် ဒဏ်ပေးတော်မူမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊
“ချစ်သားတို့၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် အပြစ်မတင်ကြနှင့်။ အမျက်ဒေါသကို ပေးချေလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါဆပ်ပေးမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ ~ ရောမ ၁၂:၁၉
ဒါဆို ငါတို့က ဘယ်သူလဲ။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော သစ္စာရှိသူများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် သစ္စာမဲ့သူတော်ကောင်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၏နောင်တရခြင်းနှင့် ဧဝံဂေလိတရားအပြည့်အစုံကို စစ်မှန်သောသစ္စာစောင့်သိရန် ယေရှုခရစ်၏ခေါ်ဆိုမှုကို ဖြေကြားခြင်းဖြင့် သတိပေးခြင်းနှင့် အမျက်ဒေါသကို လိုက်နာရန် ဆန္ဒရှိပါသလား။
မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ်သတင်းအပြည့်အစုံတွင် ဒုတိယနှင့်တတိယဖန်ပုလင်းစာတိုများ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ပြထားသည်။ ဤ “ဘုရားသခင့်အမျက်တော်ပုလင်းများ” မက်ဆေ့ခ်ျများသည် ကြောင်သူတော်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဖျက်ဆီးရန် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ သင်သည် ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ ဖန်ပုလင်း ၇ လုံး, မှားသောဝန်ကြီး, အတုအယောင်တမန်တော်မြတ်, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၆, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး တဂ် ခါး, သွေး, သေခြင်း။, တရားစီရင်ခြင်း။, အမျက်ဒေါသ ပို့စ်ညွှန်း